मेरो उमेर गएको छैन - साप्ताहिक
सातामा कतिवटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ?
म इमेज च्यानलका दुई कार्यक्रम ‘म्युजिक अफ योर च्वाइस’ तथा ‘एसएमएस एण्ड मोर’ मार्फत सातै दिन दर्शकमाझ पुगिरहेकी छु । त्यसका साथै विभिन्न सार्वजनिक समारोहहरूमा कार्यक्रम सञ्चालिकाका रूपमा पनि सक्रिय छु ।
भिजेइङ गर्दा गर्दै चलचित्रमा पनि आउनुभयो नि ?
मैले चलचित्र ‘ड्रिम्स’ मा अतिथि कलाकारका रूपमा छोटो भूमिका निर्वाह गरेकी छु । मेरो उक्त भूमिका दर्शकले मन पराएपछि अभिनयमा सक्रिय हुने दबाब बढिरहेको छ ।
सोलो नायिका बन्ने चर्चा थियो, के भैरहेको छ ?
उमेर गएको छैन, भर्खर त २२ वर्षकी भएँ । चलचित्रको विषय, कथा तथा मेरो रुचि नमिलेकाले मात्र ढिला भएको हो । म कुनै न कुनै दिन नायिकाका रूपमा दर्शकमाझ आउनेछु ।